Ma dhabaa in la jabsaday xafiiska Hanti-dhowraha Qaranka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Ma dhabaa in la jabsaday xafiiska Hanti-dhowraha Qaranka
Ma dhabaa in la jabsaday xafiiska Hanti-dhowraha Qaranka
Hanti dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa xaqiijiyay in xafiiskiisa oo uu ku dhex-leeyahay Wasaaradda Maaliyadda oo ku dhex-taalla Madaxtooyada Soomaaliya loo dhacay Habeen ka hor lagalana baxay Documentiyo muhiim ah.
Dr. Nuur Faarax Jimcaale, Hanti dhowrka Guud ee Qaranka ayaa warbahinta Gudaha u xaqiijiyay in xafiiskiisa lagala baxay agab fara badan oo yaalay xafiiskiisa, kuwaasi oo isugu jira Files iyo Computer uu isaga isticmaalayay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa xalay kulan la qaatay Hanti-dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale, waxayna ka wada hadleen arrintan iyo sida ay ku dhacday.
Ciidanka Nabad sugidda iyo kuwa AMISOM ayaa waxa ay wadaan baaritaano gaar ah, iyaga oo isticmaalaya Agab gaar ah oo baaritaanada loo adeegsado, si loo raad raaco arrintan halka ay lugta la galeyso.
Saraakiil ka akdhow xafiiska Hanti-dhowrka ayaa Risaala u sheegay in weli ay socdaan baaritaanada, bale hada ay jiraan dhowr Qof oo loo soo qabtay falkan, kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay wax ka ogaayeen arrintan.
Previous article70 qof oo laga soo musaafuriyay Maraykanka oo laga soo dajiyay Moqdisho
Next articleHiirshabelle oo ka digtay dilalka Amisom ay u gaystaan dadka Shacabka